I-Tricks On Indlela Yokuvimbela Ugaxekile Wokudluliselwa Kusuka ku-Google Analytics yakho - Iseluleko se-Semalt
Eminyakeni embalwa, ukuxhunyelwa kogaxekile kwewebhu kuye kwaba yinkinga ebalulekile. Imithombo yokudluliselwa kwe-spammy ingakwenza wenze ukuthi ucabangele ukuthi kuye kwaba nokuvakashelwa okuningi ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics ngenxa ye-spike ekuthumeni kwezokuthutha kanye nemibiko engaphezulu.
Ugaxekile wokudlulisa kabusha njengama-darodar, izinkinobho zewebhusayithi, nezinkinobho zokwabelana ezilula ziphakathi kwamathuluzi wokusebenzisa okwenza kube yingozi ekusebenzeni kwewebhusayithi ye-e-commerce. I-Google Analytics ingenye yamathuluzi abalulekile asiza izinkampani nabanikazi bebhizinisi be-e-commerce ukuba bahlaziye futhi balandele indlela elandelwa izivakashi zabo.
Nazi izinyathelo ezimbalwa ezichazwe uMax Max, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , ezokusiza ukuthi uvimbele ukugaxekile kogaxekile ekuthinteni ukusebenza kwakho kuwebhusayithi - mobile app development prices.
Ukusebenzisa ifayela le-.htaccess
Ukuvimbela ithrafikhi yokudluliselwa kogaxekile kusetshenziswe kahle nge-.htaccess. Ifayela lokucushwa lisetshenziselwa ukuqhuba iseva yakho. Le ndlela ivimbela iwebhusayithi yakho ukuthi ingadluli ngokweqile futhi ivimbela izizinda ze-spam zokudlulisela ezivela kusayithi lakho. Ukuvimbela ukudluliselwa kogaxekile nge-.htaccess kuphumelela kakhulu ngoba ifayela lingalayelwa ukuvimbela ukuvakashelwa kwe-spammy ngesizinda noma ikheli le-IP.
Inamba enhle yemikhiqizo yokuthengisa kanye nabanikazi bewebhusayithi ikhetha ukusebenzisa i -htaccess yokuvimbela ukugaxekile okufakiwe ekuthinteni ukusebenza kwamabhizinisi abo ase-intanethi. Lokhu ukufinyelela kokuxhumeka akuvimbeli kuphela ukukhipha ugaxekile wokuthunyelwa kogaxekile kanye nezinhloli zewebhu kusuka ku-GA kodwa futhi kuvimbela isizinda esinonya kusuka kumaseva awo.
Ukufaka umbhalo oqondile uma ubeka ngaphandle futhi uvimbela ukugaxekile kogaxekile ukugwema ukulahlekelwa ulwazi oludingekile mayelana newebhusayithi yakho. Bewazi ukuthi ukuhlukanisa kabili umlingisi uma uqhuba umyalelo wokulahla kungase kwehle Ibhizinisi le-B2B? Ngaphambi kokuvimbela ugaxekile wokudlulisela usebenzisa umyalo wokumyalo, cabanga ngokuxhumana nomthuthukisi wewebhu noma ukulanda i-plugin ye-WordPress.
Kukhona imibuzo evelele ekufuneni ukucaciswa umahluko phakathi kwama-robot nefayela le-.htaccess. Ngokusho kwabangu-28 (designers website) , ifayela le-robot isebenza ekusizeni amab botshi yokusesha kanye nezinhloli zewebhu ukuhambisa ithrafikhi kwiwebhusayithi kanti i-.htaccess isiza abathengisi be-intanethi ukusetha umyalo wokuvimbela ugaxekile wokudlulisela, uhla lwamakheli e-IP, futhi imoto engalungile.
Ukuthathwa kwe-GA izihlungi kugaxekile wokudluliselwa
Uma kuziwa ekuvinjeni ugaxekile wokudluliselwa ku-akhawunti ye-Google Analytics, izihlungi ze-Google Analytics zinconywa kakhulu. Izihlungi ze-GA zivumela abathengisi be-inthanethi nabathuthukisi bewebhu ukuhlaziya idatha nemibiko ku-Google Analytics. Njengomthengisi, ungasebenzisa i-GA ukukhipha i-traffic yangaphakathi eyenziwe endaweni yakho yokusebenza, ukuvimba ukugaxekile kogaxekile, nokulawula amakheli we-IP kanye nezizinda ezinonya kusuka kuwebhusayithi yakho.
Ungasebenzisa izihlungi ze-Google Analytics ukukhipha izizinda ezinonya ne-darodar kusuka kusayithi lakho. Nazi ambalwa amasu okuhamba ngawo.
Qala i-akhawunti yakho ye-GA bese ungena ngemvume.
Chofoza isithonjana 'Izilungiselelo zoMlawuli' bese ukhetha 'Zonke izihlungi'.
Yakha isihlungi esisha bese udala igama elisha ongakhumbula kalula.
Chofoza isithonjana 'Sokuhlunga Izinhlobo' bese ukhetha uhlobo 'Oluhlungiwe Uhlunga'.
Chofoza bese uthayipha 'Hlanganisa,' 'amakheli e-IP' futhi 'afana' nezithonjana emabhokisini anikezwe ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
Gcwalisa amakheli e-IP ukuba akhishwe, bese uchofoze okuthi "Londoloza."
Uma ungabandakanyi amakheli e-IP nokudluliselwa kogaxekile ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kuncomeka ukuthi uqaphele ukuthi izihlungi azisebenzi emibikweni edlule. Ukuze ufeze imiphumela emihle futhi ephumelelayo, cabanga ukuvimbela izizinda ze-spammy usebenzisa kokubili i-Google Analytics nefayela le-.htaccess. Ungalindi kuze kube yizizinda ze-spammy ezingaphezu kwe-server yakho. Faka i-Google Analytics kuwebhusayithi yakho futhi uvimbele ukugaxekile kogaxekile, abaqaphi, i-traffic traffic kanye ne-traffic yangaphakathi.